ကင်းမျှော်စင်—လေ့လာရန် စာစောင် | ဇူလိုင် ၂၀၀၈
ဖတ်လို ဂရိ ပေါ်တူဂီ (ဘရာဇီး) မြန်မာ ရိုမေးနီးယား ဟီလီဂေနွန် အင်္ဂလိပ် အီတလီ
“စိုက်ပျိုးသောသူမတတ်နိုင်။ ရေလောင်းသောသူလည်းမတတ်နိုင်။ ကြီးပွားစေတော်မူသောဘုရားသခင်သာလျှင် တတ်နိုင်တော်မူ၏။”—၁ ကော. ၃:၇။
၁။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မည်သည့်နည်းဖြင့် “ဘုရားသခင်၏လုပ်ဖော်ဆောင်ဖက်များ” ဖြစ်သနည်း။
“ဘုရားသခင်၏ လုပ်ဖော်ဆောင်ဖက်များ။” [ကဘ] တမန်တော်ပေါလုက ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးခံစားရနိုင်သည့် အခွင့်ထူးကို ယင်းသို့ဖော်ပြခဲ့သည်။ (၁ ကောရိန္သု ၃:၅-၉ ကိုဖတ်ပါ။) ပေါလုရည်ညွှန်းခဲ့သည့်အလုပ်မှာ တပည့်ဖြစ်စေခြင်းလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ ယင်းကို မျိုးစေ့စိုက်ပျိုးခြင်း၊ ရေလောင်းခြင်းတို့နှင့် နှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤအရေးကြီးသောအလုပ်ကိုအောင်မြင်လိုပါက ယေဟောဝါ၏အကူအညီလိုသည်။ ပေါလုက ‘ဘုရားသခင် ကြီးပွားစေတော်မူ’ သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့အား အသိပေးထား၏။
၂။ ‘ဘုရားသခင် ကြီးပွားစေတော်မူ’ သည်ဟူသည့်အချက်က ကျွန်ုပ်တို့၏ဓမ္မအမှုကို တော်လျော်စွာရှုမြင်ရန် အဘယ်ကြောင့် အထောက်အကူပြုသနည်း။
၂ ထိုနှိမ့်ချစေသောအချက်က ကျွန်ုပ်တို့၏ဓမ္မအမှုကို တော်လျော်စွာရှုမြင်ရန် အထောက်အကူပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဟောပြောခြင်းနှင့် သွန်သင်ခြင်းတွင် လုံ့လစိုက်လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်သော်လည်း အဆုံးတွင် ရရှိနိုင်သည့် မည်သည့်တိုးပွားမှုရလဒ်မဆိုအတွက် ချီးမွမ်းမှုအားလုံးကို ယေဟောဝါသာရထိုက်သည်။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။ ကျွန်ုပ်တို့ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ကြသည့်တိုင် ကျွန်ုပ်တို့မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကမျှ ကြီးပွားမှုဖြစ်စဉ်ကို အပြည့်အဝနားလည်သဘောပေါက်နိုင်စွမ်း၊ ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိပါ။ ဘုရင်ရှောလမုန်က ယင်းအခြေအနေကို မှန်ကန်စွာဤသို့ရေးသားဖော်ပြခဲ့၏– “အလုံးစုံတို့ကို ဖန်ဆင်းတော်မူသော ဘုရားသခင်၏အမှုတော်တို့ကို မသိနိုင်။”—ဒေ. ၁၁:၅။
၃။ ပကတိမျိုးစေ့ကြဲခြင်းနှင့် တပည့်ဖြစ်စေခြင်းလုပ်ငန်းတို့စပ်ကြား အဘယ်ဆင်တူချက်ရှိသနည်း။
၃ ကြီးပွားမှုဖြစ်စဉ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ နားလည်သဘောပေါက်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဆောင်မှုသည် အချည်းနှီးဖြစ်ပါသလော။ မဖြစ်ပါ။ ယင်းအစား စိတ်လှုပ်ရှားမှု၊ စိတ်ဝင်စားမှုကိုဖြစ်စေသည်။ ဘုရင်ရှောလမုန် ဤသို့ရေးခဲ့၏– “နံနက်အချိန်၌ မျိုးစေ့ကိုကြဲလော့။ ညဦးအချိန်၌လည်း မကြဲဘဲမနေနှင့်။ အကြောင်းမူကား အဘယ်အရာသည် အကျိုးရှိမည်ကိုလည်းကောင်း၊ နှစ်ပါးစလုံးတို့သည် အညီအမျှအကျိုးရှိမည်ကိုလည်းကောင်း မသိနိုင်။” (ဒေ. ၁၁:၆) မှန်ပါသည်၊ ပကတိမျိုးစေ့စိုက်ပျိုးရာတွင် မည်သည့်နေရာတွင်ပေါက်မည် သို့မဟုတ် အညှောက်ထွက်မည်မထွက်မည်တို့ကို ကျွန်ုပ်တို့မသိကြပါ။ အကြောင်းအချက်များစွာကို ကျွန်ုပ်တို့ မထိန်းချုပ်နိုင်ပါ။ တပည့်ဖြစ်စေခြင်းလုပ်ငန်းတွင်လည်း အလားတူဆိုနိုင်ပါသည်။ ယေရှုက ယင်းအချက်ကို ပုံဥပမာနှစ်ခုတွင် ပေါ်လွင်အောင်ဖော်ပြခဲ့ပြီး မာကုသတင်းကောင်းကျမ်းစောင် အခန်းကြီး ၄ တွင် မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ယင်းပုံဥပမာနှစ်ခုမှ အဘယ်အရာသင်ယူနိုင်သည်ကို ကြည့်ကြစို့။
၄၊ ၅။ ယေရှု၏ မျိုးစေ့ကြဲသူပုံဥပမာကို အကျဉ်းဖော်ပြပါ။
၄ မာကု ၄:၁-၉ ပါမှတ်တမ်းတွင် ယေရှုသည် မျိုးစေ့ကြဲသူတစ်ဦးအကြောင်းဖော်ပြပြီး မျိုးစေ့တို့သည် မြေအမျိုးမျိုးပေါ်ကျကြောင်း ဤသို့ဆိုထား၏– “နားထောင်ကြလော့။ မျိုးစေ့ကြဲသောသူသည် မျိုးစေ့ကြဲခြင်းငှာထွက်သွား၏။ အစေ့ကိုကြဲသည်တွင် အချို့သောအစေ့တို့သည် လမ်း၌ကျသဖြင့် မိုးကောင်းကင်ငှက်တို့သည်လာ၍ ကောက်စားကြ၏။ အချို့သောအစေ့တို့သည် မြေနည်း၍ကျောက်ပေါသောအရပ်တို့၌ကျသဖြင့် မြေတိမ်သောကြောင့် ချက်ချင်းအပင်ပေါက်သော်လည်း နေထွက်သောအခါ ပူလောင်သည်ဖြစ်၍ အမြစ်မစွဲသောကြောင့် ညှိုးနွမ်းပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ကြ၏။ အချို့သောအစေ့တို့သည် ဆူးပင်တို့တွင်ကျသဖြင့် ဆူးပင်တို့သည်ကြီးပွား၍ ညှဉ်းဆဲသောကြောင့် အသီးမသီးကြ။ အချို့သောအစေ့တို့သည် ကောင်းသောမြေ၌ကျသဖြင့် အပင်ပေါက်၍ကြီးပွားလျက် အဆသုံးဆယ်၊ အဆခြောက်ဆယ်၊ အဆတစ်ရာပွားများ၍ အသီးသီးကြ၏။”
၅ ကျမ်းစာခေတ်က မျိုးစေ့ကြဲခြင်းသည် များသောအားဖြင့် မျိုးစေ့များနေရာအနှံ့ပျံ့နှံ့ရောက်စေရန် ကြဲဖြန့်ခြင်းဖြစ်သည်။ မျိုးစေ့ကြဲသူသည် မိမိ၏အပေါ်ရုံဝတ်လုံတွင် သို့မဟုတ် ထည့်စရာတစ်ခုတွင် မျိုးစေ့များထည့်ကာ လက်လွှဲကာကြဲဖြန့်သည်။ ဤပုံဥပမာတွင် မျိုးစေ့ကြဲသူသည် မြေအမျိုးမျိုးပေါ်သို့ တမင်တကာကြဲခြင်းမဟုတ်ပါ။ ယင်းအစား ကြဲလိုက်သောမျိုးစေ့တို့သည် မြေအမျိုးမျိုးပေါ်သို့ ကျသွားခြင်းဖြစ်သည်။
၆။ မျိုးစေ့ကြဲသူပုံဥပမာကို ယေရှုမည်သို့ရှင်းပြခဲ့သနည်း။
၆ ယင်းပုံဥပမာ၏အဓိပ္ပာယ်ကို မှန်းဆနေစရာမလိုပါ။ ယေရှု၏အဓိပ္ပာယ်ရှင်းပြချက်ကို မာကု ၄:၁၄-၂၀ တွင် ဤသို့မှတ်တမ်းတင်ထား၏– ‘မျိုးစေ့ကြဲသောသူသည် တရားစကားကိုကြဲ၏။ တရားစကားကိုလမ်း၌ကြဲခြင်းအကြောင်းအရာကား တရားစကားကိုကြားသည်ရှိသော် စာတန်သည် ချက်ချင်းလာ၍ နှလုံး၌ကြဲသောတရားစကားကိုနုတ်ယူတတ်သည်ဟု ဆိုလိုသတည်း။ ကျောက်ပေါသောအရပ်၌ကြဲခြင်းအကြောင်းအရာကား တရားစကားကိုကြား၍ ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ချက်ချင်းခံယူသော်လည်း စိတ်နှလုံး၌အမြစ်မစွဲ ခဏသာတည်သဖြင့် တရားစကားကြောင့် အမှုအခင်းနှင့်ညှဉ်းဆဲခြင်းကိုခံရသောအခါ ချက်ချင်းဖောက်ပြန်တတ်သည်ဟု ဆိုလိုသတည်း။ ဆူးပင်တို့တွင်ကြဲခြင်းအကြောင်းအရာကား တရားစကားကိုကြား၍ လောကအမှု၌စိုးရိမ်ခြင်း၊ စည်းစိမ်ဥစ္စာ၏လှည့်စားခြင်း၊ ကြွင်းသောအရာကိုတပ်မက်ခြင်းစိတ်တို့သည် တရားစကားကိုလွှမ်းမိုးညှဉ်းဆဲတတ်သောကြောင့် အသီးမသီးနိုင်ဟုဆိုလိုသတည်း။ ကောင်းသောမြေ၌ကြဲခြင်းအကြောင်းအရာကား တရားစကားကိုကြား၍ခံယူသဖြင့် အဆသုံးဆယ်၊ အဆခြောက်ဆယ်၊ အဆတစ်ရာပွားများ၍ အသီးသီးတတ်သည်ဟုဆိုလိုသတည်း။’
၇။ မျိုးစေ့နှင့် မတူညီသောမြေအမျိုးမျိုးတို့သည် အဘယ်အရာကို ကိုယ်စားပြုသနည်း။
၇ မတူညီသောမျိုးစေ့အမျိုးမျိုးကို အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု ယေရှုမဖော်ပြကြောင်း သတိပြုပါ။ ယင်းအစား မျိုးစေ့တစ်မျိုးတည်းက မြေအမျိုးမျိုးအပေါ်ကျပြီး မတူညီသောရလဒ်များရကြောင်း မိန့်တော်မူသည်။ ပထမမြေအမျိုးအစားမှာ မြေမာ၊ ဒုတိယမှာ မြေတိမ်၊ တတိယမှာ ဆူးပင်များသောမြေနှင့် စတုတ္ထမှာ အသီးများစွာသီးစေသော ကောင်းသောမြေဖြစ်သည်။ (လု. ၈:၈) မျိုးစေ့မှာ အဘယ်နည်း။ ဘုရားသခင့်နှုတ်မြွက်တော်တွင်တွေ့ရသည့် ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်သတင်းဖြစ်သည်။ (မ. ၁၃:၁၉) မတူညီသောမြေအမျိုးမျိုးက အဘယ်အရာကို ကိုယ်စားပြုသနည်း။ နှလုံးအခြေအနေအမျိုးမျိုးရှိသော လူတို့ကိုဖြစ်သည်။—လုကာ ၈:၁၂၊ ၁၅ ကိုဖတ်ပါ။
၈။ (က) မျိုးစေ့ကြဲသူသည် မည်သူ့ကိုကိုယ်စားပြုသနည်း။ (ခ) ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်ဟောပြောခြင်းလုပ်ငန်းအပေါ်တုံ့ပြန်မှု အဘယ်ကြောင့်မတူကြသနည်း။
၈ မျိုးစေ့ကြဲသူသည် မည်သူ့ကိုကိုယ်စားပြုသနည်း။ ဘုရားသခင်၏လုပ်ဖော်ဆောင်ဖက်များဖြစ်သည့် ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်သတင်းကောင်း ကြွေးကြော်သူများကိုဖြစ်သည်။ သူတို့သည် ပေါလုနှင့် အာပေါလုကဲ့သို့ စိုက်ပျိုးကာ ရေလောင်းကြသည်။ သူတို့သည် ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ကြသည့်တိုင် ရလဒ်မှာမတူပါ။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။ သတင်းစကားကြားသူတို့၏ နှလုံးအခြေအနေအမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်သည်။ ပုံဥပမာတွင် မျိုးစေ့ကြဲသူသည် ရလဒ်ရရှိမှုအပေါ် ထိန်းချုပ်၍မရပါ။ ယင်းက အထူးသဖြင့် တည်ကြည်သောညီအစ်ကို၊ ညီအစ်မများသည် နှစ်ပေါင်းများစွာ၊ အချို့ဆိုလျှင် ဆယ်စုနှစ်နှင့်ချီလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသော်လည်း မပြောပလောက်သောရလဒ်သာရရှိခဲ့ပုံရသူတို့အတွက် အလွန်နှစ်သိမ့်မှုဖြစ်စေသည်။ * အဘယ်ကြောင့်နည်း။
၉။ တမန်တော်ပေါလုနှင့် ယေရှုနှစ်ဦးစလုံးသည် နှစ်သိမ့်မှုဖြစ်စေသော အဘယ်အမှန်တရားကို အလေးပေးဖော်ပြခဲ့သနည်း။
၉ မျိုးစေ့ကြဲသူ၏တည်ကြည်မှုကို သူ့အလုပ်၏ရလဒ်တို့ဖြင့် မတိုင်းတာပါ။ ယင်းအချက်ကို ပေါလုဤသို့အရိပ်အမြွက်ဖော်ပြခဲ့၏– “စိုက်ပျိုးသောသူနှင့် ရေလောင်းသောသူသည် တစ်လုံးတစ်ဝတည်းဖြစ်၍ အသီးအသီး မိမိလုပ်သည်အတိုင်း မိမိအကျိုးကိုခံရလိမ့်မည်။” (၁ ကော. ၃:၈) မိမိလုပ်သည်အတိုင်း အကျိုးကိုခံရခြင်းဖြစ်သည်၊ အလုပ်၏ရလဒ်ကြောင့်မဟုတ်ပါ။ အလားတူပင် ယေရှုက မိမိ၏တပည့်များ ဟောပြောခြင်းလုပ်ငန်းမှပြန်လာချိန်တွင် ယင်းအချက်ကို အလေးပေးဖော်ပြခဲ့သည်။ ယေရှု၏နာမအားဖြင့် နတ်ဆိုးတို့ကိုနိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့် သူတို့ဝမ်းမြောက်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့၏အတွေ့အကြုံသည် စိတ်လှုပ်ရှားစရာဖြစ်သော်လည်း ယေရှုက သူတို့အား ဤသို့မိန့်တော်မူခဲ့၏– “နတ်ဆိုးကိုနိုင်ရသောကြောင့်သာ ဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိကြနှင့်။ သင်တို့၏နာမည်များသည် ကောင်းကင်စာရင်း၌ဝင်သည်ကို ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလော့။” (လု. ၁၀:၁၇-၂၀) မျိုးစေ့ကြဲသူတစ်ဦး၏လုပ်ဆောင်မှုသည် ရလဒ်ကောင်းများစွာဖြစ်မြောက်သည်ကို မမြင်ရလျှင်ပင် သူသည် အခြားသူတို့လောက် ဇွဲမထက်သန် သို့မဟုတ် မတည်ကြည်ဟူသည့်အဓိပ္ပာယ်မသက်ရောက်ပါ။ ရလဒ်မှာ ကြားနာသူတို့၏နှလုံးအခြေအနေပေါ် များစွာမူတည်သည်။ အဆုံးတွင် ကြီးပွားစေသောအရှင်မှာ ဘုရားသခင်ဖြစ်သည်။
၁၀။ တရားစကားကိုကြားသူတစ်ဦးစီသည် ကောင်းသောမြေဟုတ်မဟုတ်ကို အဘယ်အရာက ပိုင်းဖြတ်သနည်း။
၁၀ တရားစကားကြားရသူတို့ကော အသို့နည်း။ သူတို့၏တုံ့ပြန်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ တင်ကြိုသတ်မှတ်ထားသလော။ မသတ်မှတ်ထားပါ။ မိမိတို့သည် ကောင်းသောမြေဖြစ်မည်၊ မဖြစ်မည်မှာ သူတို့နှင့်သာဆိုင်သည်။ မှန်ပါသည်၊ လူတစ်ဦး၏နှလုံးအခြေအနေသည် အကောင်းဘက် သို့မဟုတ် အဆိုးဘက်သို့ ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ (ရော. ၆:၁၇) ယေရှု၏ပုံဥပမာတွင် “တရားစကားကိုကြားသည်ရှိသော် စာတန်သည်ချက်ချင်းလာ၍ . . . တရားစကားကို နုတ်ယူတတ်သည်” ဟုဆိုထား၏။ ယင်းသည် ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမည့်အရာမဟုတ်ပါ။ ယာကုပ် ၄:၇ တွင် ခရစ်ယာန်များအား မိမိတို့ထံမှ စာတန်ထွက်ပြေးသွားရန် ‘စာတန်ကို ဆီးတားကြလော့’ ဟုအားပေးထား၍ဖြစ်သည်။ အခြားသူတို့မှာ အစပိုင်းတွင် တရားစကားကို ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ခံယူကြသော်လည်း “အမြစ်မစွဲ” သောကြောင့် လဲသွားကြကြောင်း ယေရှုဖော်ပြသည်။ သို့သော် ဘုရားသခင့်ကျေးကျွန်များသည် “အမှန်တရား၏ အလျား၊ အနံ၊ အမြင့်၊ အနက်” နှင့် “အသိပညာထက် သာလွန်ကောင်းမွန်သည့် ခရစ်တော်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို” ပိုင်းခြား၍သိမြင်နိုင်ဖို့ “အုတ်မြစ်ပေါ်တွင် အမြစ်စွဲလျက် အခြေခိုင်ကြ” ရန်တိုက်တွန်းထားသည်။—ဧ. ၃:၁၇-၁၉၊ ကဘ; ကော. ၂:၆၊ ၇။
၁၁။ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့် စည်းစိမ်ဥစ္စာက တရားစကားကိုမပိတ်ဆို့စေရန် လူတစ်ဦးမည်သို့ရှောင်နိုင်သနည်း။
၁၁ တရားစကားကိုကြားသောအခြားသူတို့သည် ‘လောကအမှု၌စိုးရိမ်ခြင်း၊ စည်းစိမ်ဥစ္စာ၏လှည့်စားခြင်း’ တို့ကို တရားစကားအပေါ်လွှမ်းမိုးပိတ်ဆို့စေရန် ခွင့်ပြုကြကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ (၁ တိ. ၆:၉၊ ၁၀) ယင်းသို့မဖြစ်စေရန် မည်သို့ရှောင်နိုင်သနည်း။ တမန်တော်ပေါလု ဤသို့အဖြေပေး၏– “သင်တို့၏ကျင့်ကြံပြုမူခြင်းသည် ငွေကိုတပ်မက်ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်၍ ကိုယ်၌ရှိသောဥစ္စာနှင့် ရောင့်ရဲခြင်းရှိကြလော့။ အကြောင်းမူကား ‘ငါသည်သင့်ကိုမစွန့်၊ သင့်ကိုအလျှင်းပစ်၍မထား’ ဟုကတိတော်ရှိ၏။”—ဟေဗြဲ ၁၃:၅။
၁၂။ ကောင်းသောမြေကို ကိုယ်စားပြုသူတို့သည် အဘယ်ကြောင့် မတူညီသောပမာဏဖြင့် အသီးသီးကြသနည်း။
၁၂ နောက်ဆုံး၊ ကောင်းသောမြေပေါ်ကျသည့်မျိုးစေ့တို့သည် “အဆသုံးဆယ်၊ အဆခြောက်ဆယ်၊ အဆတစ်ရာပွားများ၍ အသီးသီးတတ်သည်” ဟု ယေရှုမိန့်တော်မူသည်။ တရားစကားကိုတုံ့ပြန်သော အချို့သူတို့သည် နှလုံးအခြေအနေကောင်းရှိပြီး အသီးသီးကြသည့်တိုင် သတင်းကောင်းကြွေးကြော်ခြင်းတွင် သူတို့ပါဝင်နိုင်မှုမှာ သူတို့၏အခြေအနေနှင့်အညီ အမျိုးမျိုးဖြစ်သည်။ ဥပမာ၊ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်မှု သို့မဟုတ် ခွန်အားယုတ်လျော့စေသောရောဂါက အချို့သူတို့အား ဟောပြောခြင်းလုပ်ငန်းပါဝင်နိုင်မှုကို အကန့်အသတ်ဖြစ်စေပေမည်။ (မာကု ၁၂:၄၃၊ ၄၄ နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။) မျိုးစေ့ကြဲသူသည် ကြီးပွားမှုအပေါ် အနည်းငယ်သာထိန်းချုပ်နိုင် သို့မဟုတ် လုံးဝမထိန်းချုပ်နိုင်သည့်တိုင် ယေဟောဝါကြီးပွားစေမှုကိုမြင်ရသည့်အခါ သူပျော်ရွှင်သည်။—ဆာလံ ၁၂၆:၅၊ ၆ ကိုဖတ်ပါ။
၁၃၊ ၁၄။ (က) ယေရှု၏ မျိုးစေ့ကြဲသောလူပုံဥပမာကို အကျဉ်းဖော်ပြပါ။ (ခ) မျိုးစေ့ကြဲသူသည် မည်သူ့ကို ကိုယ်စားပြုပြီး မျိုးစေ့မှာ အဘယ်အရာနည်း။
၁၃ မာကု ၄:၂၆-၂၉ တွင် မျိုးစေ့ကြဲသူဆိုင်ရာ နောက်ပုံဥပမာတစ်ခုကို တွေ့ရ၏– “လူသည် လယ်၌မျိုးစေ့ကြဲပြီးမှ နောက်တစ်ဖန် မိမိမကြည့်မမှတ်၊ ည၊ နေ့၊ အိပ်လျက်၊ နိုးလျက်နေသော်လည်း [“ညအခါအိပ်လိုက်၊ နေ့အခါထလိုက်နှင့် မည်သို့ဖြစ်သည်ကိုမသိဘဲ၊” ကဘ] အပင်ပေါက်၍ကြီးပွားသည်နှင့် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်တူ၏။ မြေကြီးသည် မိမိအလိုအလျောက်အသီးကိုသီးစေ၍ ရှေးဦးစွာအညှောက်၊ ထိုနောက်အနှံ၊ ထိုနောက်အနှံထဲမှာ အောင်မာသောအဆန်ကိုဖြစ်စေတတ်၏။ အသီးမှည့်၍ရိတ်ချိန်ရောက်သောအခါ လယ်ရှင်သည် မဆိုင်းမလင့် တံစဉ်နှင့်ရိတ်စေတတ်သည်။”
၁၄ မျိုးစေ့ကြဲသူမှာ မည်သူနည်း။ ခရစ်ယာန်ဘောင်ရှိအချို့က ယေရှုကိုယ်တော်တိုင်ကိုရည်ညွှန်းသည်ဟု ယူမှတ်ကြသည်။ သို့သော် ယေရှုသည် အိပ်ပြီး မျိုးစေ့အပင်ပေါက်၍ကြီးပွားသည်ကိုမသိဟု မည်သို့ပြောနိုင်မည်နည်း။ ယေရှုသည် ကြီးပွားမှုဖြစ်စဉ်ကိုသိရှိသည်မှာ သေချာသည်။ သို့ဖြစ်၍ ဤမျိုးစေ့ကြဲသူမှာ အစောပိုင်းတွင်ဖော်ပြခဲ့သကဲ့သို့ ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်သတင်းကြွေးကြော်သူများ၊ ထက်သန်စွာဟောပြောခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်မျိုးစေ့ကြဲသူများကို ကိုယ်စားပြုသည်။ မြေ၌ကြဲသောမျိုးစေ့မှာ သူတို့ဟောပြောသော တရားစကားဖြစ်သည်။ *
၁၅၊ ၁၆။ ပကတိနှင့် ဝိညာဉ်ရေးကြီးပွားမှုအကြောင်း အဘယ်အမှန်တရားကို မျိုးစေ့ကြဲသူပုံဥပမာတွင် ယေရှုဖော်ပြခဲ့သနည်း။
၁၅ ယေရှုက မျိုးစေ့ကြဲသူသည် “ညအခါအိပ်လိုက်၊ နေ့အခါထလိုက်” နေသည်ဟုဆိုထား၏။ ယင်းသည် မျိုးစေ့ကြဲသူဘက်မှ ပေါ့လျော့မှုမဟုတ်ပါ။ လူအများစုလုပ်ကြသော ဘဝ၏ပုံမှန်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကို ပုံဖော်ခြင်းမျှသာဖြစ်သည်။ ဤအခန်းငယ်တွင်အသုံးပြုထားသောစကားလုံးက နေ့တွင်အလုပ်လုပ်ပြီး ညတွင်အိပ်ခြင်းဖြစ်စဉ်ကို ဖော်ပြသည်။ ထိုအချိန်အတွင်း အဘယ်အရာဖြစ်ပျက်သည်ကို ယေရှုအလေးပေးဖော်ပြ၏။ “အပင်ပေါက်၍ကြီးပွားသည်” ဟု ကိုယ်တော်မိန့်တော်မူသည်။ “မည်သို့ဖြစ်သည်ကိုမသိဘဲ” ဟုယေရှုဆိုထား၏။ ကြီးပွားမှုသည် “မိမိအလိုအလျောက်” ဖြစ်သည်ဟူသည့်အချက်ကို အလေးပေးဖော်ပြထားသည်။ *
၁၆ ဤတွင် ယေရှုအဘယ်အချက်ကိုဖော်ပြနေခြင်းနည်း။ ကြီးပွားမှုကို အလေးပေးပြောခြင်းဖြစ်ပြီး ယင်းသည် တဖြည်းဖြည်းဖြစ်ပေါ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သတိပြုပါ။ “မြေကြီးသည် မိမိအလိုအလျောက်အသီးကိုသီးစေ၍ ရှေးဦးစွာအညှောက်၊ ထိုနောက်အနှံ၊ ထိုနောက်အနှံထဲမှာ အောင်မာသောအဆန်ကို ဖြစ်စေတတ်၏။” (မာ. ၄:၂၈) ကြီးပွားမှုသည် တဖြည်းဖြည်းနှင့် သူ့အဆင့်အလိုက်ဖြစ်သည်။ အလျင်အမြန်ကြီးထွားရန် အတင်းအကျပ်ပြု၍မရပါ။ ဝိညာဉ်ရေးကြီးပွားမှုသည်လည်း အလားတူပင်ဖြစ်သည်။ တလိုတလားရှိသူ၏နှလုံးတွင် အမှန်တရားကြီးပွားလာစေရန် ယေဟောဝါအခွင့်ပေးသည့်အနေနှင့် သူ့အဆင့်နှင့်သူဖြစ်လာသည်။—တ. ၁၃:၄၈၊ ကဘ; ဟေဗြဲ ၆:၁၊ ၂။
၁၇။ အမှန်တရားမျိုးစေ့ သီးပွင့်လာသောအခါ မည်သူတို့ အတူဝမ်းမြောက်ကြသနည်း။
၁၇ “အသီးမှည့်၍” ရိတ်သိမ်းချိန်တွင် မျိုးစေ့ကြဲသူသည် မည်သို့ပါဝင်လုပ်ဆောင်သနည်း။ တပည့်သစ်များ၏နှလုံးတွင် ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်အမှန်တရားကို ယေဟောဝါကြီးပွားစေသည့်အခါ နောက်ဆုံးသူတို့သည် ဘုရားသခင်ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီး မိမိတို့အသက်တာကို ကိုယ်တော်ထံအပ်နှံရန် လှုံ့ဆော်ခံရသည့်အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိလာသည်။ မိမိတို့၏အပ်နှံမှုကို ရေနှစ်ခြင်းအားဖြင့် ဖော်ပြကြသည်။ ဆက်၍ရင့်ကျက်သွားသော ညီအစ်ကိုများသည် အသင်းတော်တွင် ပိုကြီးသောတာဝန်များကို တဖြည်းဖြည်းနှင့် လက်ခံရရှိ နိုင်သည်။ ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်အသီးကို မူလမျိုးစေ့ကြဲသူအပြင် တပည့်တစ်ဦးဖြစ်လာစေသည့်မျိုးစေ့ကြဲခြင်းတွင် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျပါဝင်မည်မဟုတ်သော အခြားဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ကြွေးကြော်သူများလည်း အကျိုးခံစားကြရသည်။ (ယောဟန် ၄:၃၆-၃၈ ကိုဖတ်ပါ။) မှန်ပါသည်၊ “ပျိုးကြဲသောသူနှင့် စပါးရိတ်သောသူတို့သည် အတူဝမ်းမြောက်ကြလိမ့်မည်။”
ယနေ့ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် သင်ခန်းစာ
၁၈၊ ၁၉။ (က) ယေရှု၏ပုံဥပမာများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းက သင့်ကိုယ်တိုင်အတွက် မည်သို့အားပေးမှုဖြစ်သနည်း။ (ခ) နောက်ဆောင်းပါးတွင် အဘယ်အကြောင်းအရာကို သုံးသပ်ကြမည်နည်း။
၁၈ မာကု အခန်းကြီး ၄ တွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသော ပုံဥပမာနှစ်ခုကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းမှ အဘယ်အရာသင်ယူရရှိသနည်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မျိုးစေ့ကြဲခြင်းလုပ်ငန်းကို လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း အထင်အရှားတွေ့မြင်နိုင်သည်။ အကြောင်းပြချက်များ၊ တွေ့ကြုံလာနိုင်သော ပြဿနာများ၊ အခက်အခဲများကြောင့် ယင်းလုပ်ငန်းကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းမှ ရပ်တန့်သွားစေရန် ဘယ်တော့မျှခွင့်မပြုသင့်ပါ။ (ဒေ. ၁၁:၄) တစ်ချိန်တည်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏လုပ်ဖော်ဆောင်ဖက်များအဖြစ် သတ်မှတ်ခံရသည့်အခွင့်ထူးကို အမှတ်ရကြသည်။ ယေဟောဝါသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုများ၊ သတင်းစကားလက်ခံသူတို့၏ ကြိုးစားအားထုတ်မှုများကို ကောင်းချီးပေးခြင်းဖြင့် ဝိညာဉ်ရေးကိုကြီးပွားစေတော်မူသောအရှင်ဖြစ်သည်။ လူတစ်ဦး တပည့်ဖြစ်လာရန် ကျွန်ုပ်တို့အတင်းဖိအားပေး၍မရနိုင်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့သိကြသည်။ ထို့ပြင် ကြီးပွားမှုနှေးခြင်း သို့မဟုတ် မကြီးပွားခြင်းတို့ဖြစ်လျှင် စိတ်ဓာတ်ကျ သို့မဟုတ် စိတ်ပျက်အားလျော့စရာမလိုကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့သိထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အောင်မြင်မှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အားပေးအပ်ထားသော ‘လူမျိုးအပေါင်းတို့အားသက်သေဖြစ်မည်အကြောင်း ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်နှင့်ယှဉ်သော ဧဝံဂေလိတရားကို’ ဟောပြောခြင်းအခွင့်ထူးအပေါ်နှင့် ယေဟောဝါအပေါ် ကျွန်ုပ်တို့၏တည်ကြည်မှုအားဖြင့်တိုင်းတာကြောင်း သိရခြင်းက အလွန်နှစ်သိမ့်မှုဖြစ်စေသည်။—မ. ၂၄:၁၄။
၁၉ ယေရှုသည် တပည့်သစ်များကြီးပွားမှု၊ ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်လုပ်ငန်း ကြီးပွားမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့အား နောက်ထပ်အဘယ်အရာ သင်ပေးခဲ့သနည်း။ ယင်းမေးခွန်း၏အဖြေကို သတင်းကောင်းကျမ်းစောင်များတွင် မှတ်တမ်းတင်ထားသည့် အခြားပုံဥပမာများတွင် တွေ့ရသည်။ ယင်းပုံဥပမာများထဲမှအချို့ကို နောက်ဆောင်းပါးတွင် ဆန်းစစ်ကြပါမည်။
^ အပိုဒ်၊ 8 ၂၀၀၅ ယေဟောဝါသက်သေများ၏ နှစ်ချုပ်စာအုပ်၊ စာမျက်နှာ ၂၁၀-၂၁၁ တွင်ဖော်ပြထားသော အိုက်စလန်တွင်အမှုဆောင်ခဲ့သူ ညီအစ်ကို ဂျော့ဂ်ျ ဖယိုလ်နာ လင်ဒါလ်၏ဥပမာနှင့် ၁၉၈၈ ယေဟောဝါသက်သေများ၏ နှစ်ချုပ်စာအုပ်၊ စာမျက်နှာ ၈၂-၉၉ [လိပ်] တွင်တွေ့ရသည့် အိုင်ယာလန်နိုင်ငံတွင် ချက်ချင်းလက်ငင်းအကျိုးရလဒ်များမရှိဘဲ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာသည့်တိုင် စွဲမြဲစွာလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည့် တည်ကြည်သောကျေးကျွန်တို့၏ တွေ့ကြုံမှုများကို သုံးသပ်ကြည့်ပါ။
^ အပိုဒ်၊ 14 ယခင်က ဤမဂ္ဂဇင်းတွင် မျိုးစေ့သည် ရင့်ကျက်ခြင်းသို့တက်လှမ်းရာတွင်လိုအပ်သော၊ ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကြောင့် ဩဇာလွှမ်းမိုးခံရသော ဥပဓိရုပ်အရည်အသွေးများကို ကိုယ်စားပြုသည်ဟု ရှင်းပြခဲ့သည်။ သို့သော် ယေရှု၏ပုံဥပမာတွင် မျိုးစေ့သည် မကောင်းသောမျိုးစေ့ သို့မဟုတ် ပုပ်ပျက်သောအသီးအဖြစ်သို့ မပြောင်းသွားသည်ကို မှတ်သားသင့်သည်။ ယင်းသည် အပင်ပေါက်ကြီးပွားခြင်းအကြောင်းကိုသာ ဆိုသည်။—ကင်းမျှော်စင်၊ ဇွန် ၁၅၊ ၁၉၈၁၊ စာမျက်နှာ ၁၂-၁၄ ကိုရှု။
^ အပိုဒ်၊ 15 ဤအသုံးအနှုန်း၏တစ်ခုတည်းသော အခြားအသုံးပြုပုံကို တမန်တော် ၁၂:၁၀ တွင်တွေ့ရပြီး သံတံခါးသည် “အလိုလို” ပွင့်သည်ဟုဆိုထား၏။
• ပကတိမျိုးစေ့ကြဲခြင်းနှင့် ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်သတင်းဟောပြောခြင်းစပ်ကြား ဆင်တူချက်အချို့ကား အဘယ်နည်း။
• ယေဟောဝါသည် ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်သတင်းဟောပြောသူတစ်ဦး၏ တည်ကြည်မှုကို မည်သို့တိုင်းတာသနည်း။
• ပကတိနှင့် ဝိညာဉ်ရေးကြီးပွားမှုအကြား အဘယ်ဆင်တူချက်ကို ယေရှုအလေးပေးခဲ့သနည်း။
• မည်သို့အားဖြင့် “ပျိုးကြဲသောသူနှင့် စပါးရိတ်သောသူတို့သည် အတူဝမ်းမြောက်ကြ” သနည်း။
[စာမျက်နှာ ၁၃ ပါရုပ်ပုံများ]
ယေရှုသည် ဘုရားသခင့် နိုင်ငံတော်သတင်း ဟောပြောသူတစ်ဦးကို မျိုးစေ့ကြဲသူတစ်ဦးနှင့် အဘယ်ကြောင့်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့သနည်း
[စာမျက်နှာ ၁၅ ပါရုပ်ပုံများ]
ကောင်းသောမြေကို ကိုယ်စားပြုသူတို့သည် မိမိတို့အခြေအနေနှင့်အညီ ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်ဟောပြောခြင်းတွင် နှလုံးအကြွင်းမဲ့ပါဝင်ကြ
[စာမျက်နှာ ၁၆ ပါရုပ်ပုံများ]
တစ်အိမ်မှတစ်အိမ်ဓမ္မအမှု၏ အခက်အခဲများကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းခြင်း
အဘယ်အရာသည် အကျိုးရှိမည်ကို မသိနိုင်
ကျွန်မတို့မစိုးရိမ်ဘူး —ကျွန်မတို့ဘက်မှာ ယေဟောဝါရှိတယ်
အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့် မျှော်လင့်ပြီး ရွှင်လန်းလော့
စာသား စာပေ ကူးယူရာမှာ ရွေးချယ်စရာများ ကင်းမျှော်စင်—လေ့လာရန် စာစောင် ဇူလိုင် ၂၀၀၈
ကင်းမျှော်စင်—လေ့လာရန် စာစောင် ဇူလိုင် ၂၀၀၈